. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .: March 2010
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ခြုံလွှမ်းဘူးတဲ့ ဒီ စာမျက်နှာတွေ
တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ လေအဟုန်မှာ လွင့်မျော
ဒါတွေက တကယ် အတိတ်တဲ့
မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ ထိုင်ခုံလေး နှစ်ခုပါတယ်
စမ်းချောင်းလေး ကွေ့ကွေ့ ကောက်ကောက်စီးတယ်
သာယာချိုမြိန်ဖွယ် ရယ်သံတချို့ စွက်တယ်
ငိုသံတချို့နဲ့ မျက်ရည်စ တချို့အလည်လာတယ်
ဒေါသသံတွေနဲ့ တံခါးပိတ်သံ ကြမ်းကြမ်း တချို့
တချို့စာမျက်နှာတွေက အနားသတ်တွေ စုတ်ပြဲလို့
တည်ငြိမ်တဲ့ အပြုံးတ၀က် စူးစမ်းခြင်းတ၀က်
သံယောဇဉ် တစ နာကျင်ခြင်း တစ
နှမြောတသခြင်းတွေကို မာနတစုံနဲ့ ဖုံးတယ်
ဒါက ဒီစာအုပ်ရဲ့ အဆုံးသတ်
အဖြူထည် သက်သက် ဖြစ်ဖို့
တစုံတခုမှ မရေးခြစ်မိအောင် ကြိုးစားမှ ထင်တယ်
စိတ်ကူးလေးပါ .. ဘ၀တခုက ဒိုင်ယာရီတအုပ်ဆိုရင် စာအုပ်ထဲက တမ်းတစရာတွေကို ရှာဖွေ တမ်းတပြီး ရေးလိုက်ပါတယ် ..း) တချို့အတွက်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ် ဒိုင်ယာရီ တအုပ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် .. ကိုယ်တိုင် စာအုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးစာရွက်ကို ရေးရတော့မယ့်အချိန် ရောက်လာခဲ့ရင် ... "The End" ဆိုပြီးတော့သာ ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ် .. :D
အတွေးထဲမှာတော့ မိသားစုလေးတခုလိုပါပဲ .. အချိန်တန်ပြီဆို ဘယ်သူ မလာသေးဘူးလဲ .. လာနေပြီလား .. ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ .. ဒီလူက မလာဘူးလား .. ဘာလို့လဲ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ စသည်ဖြင့် ချော့တန်ချော့ ခြောက်တန်ခြောက် .. နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး အပြိုင်ပလီ (အဲ .. ဟုတ်ပါဘူး .. :P) အပြိုင်အဆိုင် ချစ်နေကြပါတယ် ဆိုပါတော့ .. :P
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တွေးဖို့ အချိန် မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် .. ပလီရ ရန်ဖြစ်ရနဲ့ တွေးမယ်ကြံလိုက်ရင် အိပ်ချိန်ရောက်ရောက် သွားလို့ပါ .. :D ပြောရမယ်ဆို တွေးလည်း မတွေးချင်ဘူး .. သိပ်ဝေးဝေးထိ တွေးလိုက်မိရင် ခု စိတ်ချမ်းသာနေတာတွေရဲ့ ဝေးဝေးကို ရောက်သွားမှာဆိုးလို့ .. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆင်ခြင်မိတာက
မြင်နေရတဲ့ မျက်နှာတွေ :P .. ရောက်နေတဲ့နေရာက
အချိန်တွေ .. မလိုရင် သိပ်ကုန်လွယ်တာပဲ .. မြန်မြန်ကုန်စေချင်ရင် မကုန်ဘူး .. ချစ်နေတာက
ဝေးဝေးကဆို မိသားစုလေး .. အနားမှာတော့ အများကြီးပဲ .. တယောက်တမျိုး အားလုံးကတော့ ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတာပဲ ..း) စိတ်ပျက်နေမိတာက
လူကြီးလူကောင်းယောင်ဆောင်ထားတဲ့ လူတွေ .. မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ အရှက် မရှိသူတွေ .. နားထောင်နေမိတဲ့ သီချင်း
ကြားကြားသမျှ .. တမ်းတနေမိတာက
အိမ်ပြန်ချိန် .. ရုံးပိတ်ရက် .. စွဲလန်းနေမိတာက
မရှိဘူးထင်တယ် .. စဉ်းစားလို့ မရဘူး .. မေ့လျှော့ပြစ်နေတာက
လိုအပ်တာလေးတွေ အချိန်နဲ့ အမျှ ရှိနေပေမယ့် အထူးတလည် လိုအပ်တာမျိုးတော့ မရှိပါ .. စားဖြစ်နေတာက
ဆိုက်ပရက်စ်က စာဖိုးမှူးကြီး လက်ရာ ..း)) လွမ်းနေမိတာက
ခုတော့ သနားစရာလူ မရှိဘူး .. ကိုယ့်နားလည်း ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလေ .. သနားဖို့ ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းကိုမြင်ရင်တော့ သနားတယ် .. တောင်းမိနေတဲ့ဆု
ဆုမတောင်းဖြစ်ဘူး .. ဆန္ဒတွေတော့ ရှိတယ် .. ဆန္ဒတွေအတိုင်း ပြည့်ဝလာရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ .. ထပ်ပြန်တလဲလဲ အော်ဟစ်နေမိတာက
ကိုယ့်ထက် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ကောင်းမွန် ပြတ်သားသူတွေ .. တပါးသူ အပေါ် စေတနာ ထားနိုင်လွန်းတဲ့ သူတွေ .. ဇွဲ ၀ီရိယ အားကောင်းတဲ့သူတွေ .. အမှား အမှန်ကို ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေ .. ကြိတ်ပြီး အထင်သေးနေမိတာက
အရှက်တရား မရှိတဲ့သူတွေ .. ကိုယ် အသာရနေရင် ပြီးရော သူတပါးအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် မရှိသူတွေ .. ၀န်ခံချင်တာက
ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့ ၃ရက် အချိန်ယူလိုက်ရပါတယ် .. :P ချစ်လှစွာသော အကိုကြီး ကိုဖိုးစိန်က စာမရေးတဲ့သူတွေကို ကြည့်မရလို့ ဆိုပြီး တဂ်ပါတယ် .. ဘယ်ကြည့်လို့ရမလဲ .. နေရာချင်းက အရမ်းဝေးတာကိုး .. :P ရေးသားသူ
3/22/2010 06:59:00 PM
ကော်ဖီကို စွဲစွဲလန်းလန်း သောက်ဖြစ်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ .. အချိန်အားတိုင်း .. စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း .. သတိရတိုင်း ကော်ဖီကို သောက်ဖြစ်တယ် .. (သတိရတိုင်းဆိုတာ တခြားမတွေးပါနဲ့ .. ကော်ဖီသောက်ဖို့ သတိရတာကို ဆိုလိုတာပါ .. :D .. ဒီတိုင်း သတိရတတ်တဲ့သူကတော့ ကော်ဖီကို မစွဲလန်းသလို သောက်လေ့ သောက်ထလည်း မရှိပါဘူး .. ဤကား ကြော်ငြာ :P)
ကော်ဖီကို အိမ်က ဖေကြီးတို့မေကြီးတို့ကလည်း သောက်တတ်တော့ ငယ်ငယ်တည်းက သောက်ဖြစ် သောက်တတ်ခဲ့ပါတယ် .. ကော်ဖီသောက်ပြီး အိပ်မပျော်ခြင်းအဖြစ်ကိုလည်း မကြုံတွေ့ဘူးလို့ စာမေးပွဲရက်တွင်းမှာတောင် ကော်ဖီ သောက်ကောင်း အိပ်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. ကော်ဖီကို ဘာလို့ ကြိုက်လဲ .. ကျမအတွက် ကော်ဖီက ကိုယ် ချိုချင်ရင် ချိုတဲ့အရသာ ပေါ်အောင် ဖျော်နိုင်သလို ခါးချင်ရင်လည်း ခါးတဲ့အရသာ ပေါ်အောင် ဖျော်ပြီး စိတ်ကြိုက် သောက်နိုင်ပါတယ် .. တခါတလေ အချိုလွန်ပြီး ပျက်သွားတဲ့အခါ သွန်ပစ်လိုက်ရုံကလွဲပြီး တခြားဆိုးကျိုးလည်း မပေးပါဘူး .. ခါးသက်တဲ့ အရသာကို မနှစ်သက်ပေမယ့် တခါတလေ ခါးသက်သက်အရသာကလည်း ကျမကို ဆွဲဆောင်တတ်ပါသေးတယ် .. စာအုပ်စာတမ်း လှလှလေးများ .. ဘောလ်ပင် ရောင်စုံ လှလှလေးများ ..
စာအုပ်လှလှလေးတွေ ဘောလ်ပင်ရောင်စုံလေးတွေ မြင်ရင် ကျမစိတ်က ၀ယ်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ် .. ဒါကလည်း ငယ်တည်းက ကျမ အကျင့် တခုပါပဲ .. ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ စာအုပ်လှလှလေးတွေမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေ ရေးကူးတတ်တယ် .. ရောင်စုံတွေနဲ့လည်း ဟိုလျှောက်ခြစ် ဒီလျှောက်ခြစ်ပေါ့ .. လက်ရေးကတော့ မလှပါဘူး .. :P
နောက် .. ကျမမှာ ရင်ဖွင့်ဖော် သူငယ်ချင်း မရှိပေမယ့် စာအုပ်လှလှလေးတွေမှာ စိတ်ချ လက်ချ ရင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ် .. သူက နှုတ်လုံတယ် .. သူတပါး မသိစေချင်တဲ့ကိစ္စကို ကျမခွင့်ပြုချက် မရပဲ ဘယ်သူမှ မသိစေရဘူး .. ဒါပေမယ့် ကျမ ဘေးနားက စာအုပ် လှလှလေးတွေက စုတ်ပြတ်သတ်နေတတ်တယ် .. အဖုံးသာလှပြီး အထဲကစာရွက်တွေကတော့ အမြဲတမ်း စုတ်ဖြဲ ခံရတတ်တယ် ..
ကွန်ပျူတာကတော့ ကျမအတွက် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်တဲ့ အရာပါပဲ .. ကွန်ပျူတာနဲ့အတူ တွဲရက်လိုအပ်တာကတော့ အင်တာနက်ပေါ့ .. ခုလို စာတွေရေးဖို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ .. အလုပ်ချိန်မှာ ပျင်းရင် သူငယ်ချင်းတွေကို လှမ်းနားပူဖို့ .. အင်တာနက်က မရှိမဖြစ်ပါ ..
သီချင်းတွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ် .. တခါတလေ ကိုယ်လွမ်းတဲ့အချိန် သူက လိုက်လွမ်းပေးတယ် .. ကိုယ်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန် အတူလိုက်ပြီး ပေါက်ကွဲပေးတတ်သလို တခါတလေ စိတ်ဖြေဆေး တခုလိုပဲ .. သီချင်းတွေကလည်း ကျမအတွက် မရှိမဖြစ်တခုပါပဲ ..
ဒီလိုတွေးလိုက်တော့လည်း ကျမမှာ အဖော်တွေ များမှ များပဲ .. ကျမအနားမှာ တခုမဟုတ်တခု (သို့မဟုတ်) အားလုံးက ရှိနေခဲ့တယ် .. မဇွန်တဂ်တဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးပါ .. မိုးခါး အကြိုက်တွေ များလွန်းလို့ ခုချက်ချင်း ပေါ်လာတဲ့ အကြိုက်တွေကို စာစီရေးလိုက်ပါတယ် .. မကြိုက်တာတွေလည်း များမှ များပါပဲ .. :D ရေးတာ နောက်ကျလို့ စိတ်မဆိုးဘူး ထင်ပါတယ် ..း)) စိတ်ဆိုးနဲ့နော် ..း)) အရှုပ်တွေ များလွန်းနေလို့ပါ .. :D
3/15/2010 03:01:00 AM